Madaxweyne Muuse Biixi oo qaabilay wefdigii Shiinaha | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Madaxweyne Muuse Biixi oo qaabilay wefdigii Shiinaha
Madaxweyne Muuse Biixi oo qaabilay wefdigii Shiinaha
War kasoo baxay madaxtooyada Somaliland ayaa lagu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi uu qaabilay wefti heersare ah u hogaaminayo wakiilka Shiinaha u qaabilsan iskaashiga Afrika.
Waxay ka wadahadleen xoojinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga, dhaqaalaha iyo horumarka.
Dhinaca kale,Waxa magaalada Hargaysa ee xarunta Jamhuuriyadda Goonni Isu-taageeda ku dhawaaqday ee Somaliland maalmahan joogay wefti uu hogaaminayo safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya oo doonayey in ay wadaxaajood la yeeshaan madaxda Somaliland.
Waxaanay wararku tibaaxayaan in Shiinuhu doonayo in uu Somaliland ku qanciyo in ay ka noqoto xiriir dibolomaasiyadeed oo ay la yeelatay Taiwan oo ah dal waddamo tiro yar oo dunida ahi aqoonsanyihiin hase yeeshee Shiinuhu u arko qayb dhulkiisa ka mid ah.
Ilaa hadda ma jirto wax faahfaahin ah oo ku saabsan arrintaas oo kasoo baxay kulankaas dhexmaray waftiga Shiinaha iyo Somaliland.
BBC-da waxay isku dayday inay la xiriirto wasaaradda arrimaha Somaliland iyo safaaradda Shiinaha balse wax jawaab ah kama aanan helin. Wararka ayaa intaa ku daraya, in Somaliland dhankeedu ka cagajiidayso waxyaabaha uu u soo bandhigay shiinuhu, oo uu rabo inuu kaga beddesho inay ka noqdaan xiriirkooda Taiwan.
Somaliland iyo Taiwan ayaa horraantii bishii hore ku heshiiyay heshiis dhanka iskaashiga ah.
Wasiirka arrinmaha dibadda ee Somaliland, Yaasin Xaaji Maxamuud Faratoon ayaa xilliggaas sheegay inay soo dhaweynayaan iskaashi dhexmara labada dhinac.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan saxiixno heshiis dhanka diblomaasiyadda oo dhexmara labadeena dal”, ayuu bartriisa Twitter-ka kusoo qoray wasiir Faratoon.